အင်္ဂလန်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအများဆုံး(၂)သင်း အခုလိုဖြစ်နေတာက စိတ်ပျက်စရာပါ
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ ရုန်းကန်ရတော့မယ့် လီဗာပူးလ်နဲ့ မန်ယူ
7 Nov 2018 . 5:57 PM
ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အင်္ဂလန်ကလပ် (၄)သင်းဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီး၊ မန်ယူ၊ လီဗာပူးလ်၊ စပါးအသင်းတို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေပြီး အံ့သြစရာကောင်းတာက (၃)ပွဲကစားပြီးချိန်အထိ ဘယ်အသင်းနောက်တစ်ဆင့် တက်မလဲဆိုတာ အသေအချာ မပြောနိုင်သေးတာပါ။ ဒီ(၄)သင်းထဲမှာ မန်စီးတီးတစ်သင်းလောက်ပဲ အုပ်စုကို ဦးဆောင်နေပြီး နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိနေပေမယ့် စပါး၊ မန်ယူ၊ လီဗာပူးလ်တို့ကတော့ (၅၀-၅၀)အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ ပိုဆိုးတာက အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကရဲ့ အောင်မြင်မှု အများဆုံး အသင်း(၂)သင်းဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးလ်၊ မန်ယူတို့အတွက် လက်ကျန်ပွဲတွေမှာ လုံးဝအမှား မခံတော့တာပါ။
ထူးခြားတာက ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိဘဲ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ရုန်းကန်နေရတာပါပဲ။ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဇီဗက်ဒါနဲ့ပွဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ နောက်တစ်ဆက်တက်ဖို့ သေချာမယ့် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကို လက်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဂိုးသွင်းခွင့်တွေ အကြိမ်ကြိမ်လွဲချော်ခဲ့ပြီး ဇီဗက်ဒါအသင်းကတော့ အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်ရရင် တစ်ကြိမ်အကောင်းဆုံး အသုံးချလို့လည်း မမျှော်လင့်တဲ့ ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။
လက်ကျန်ပွဲတွေမှာ PSG နဲ့ အဝေးကွင်း၊ နာပိုလီနဲ့ အိမ်ကွင်း ပွဲကျပ်တွေ ဆက်ကစားရမှာဖြစ်လို့ ကြိုးကြာနီတို့ရဲ့ အုပ်စုက တက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်က မရေမရာဖြစ်လာပါပြီ။ ပိုဆိုးတာက နာပိုလီနဲ့ PSG အသင်းတို့ဟာ လက်ကျန်ပွဲမှာ ဇီဗက်ဒါနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး (၃)မှတ် သေချာတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာကြောင့် လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် မြွေပူရာကင်းမှောက်ပါပဲ။
လီဗာပူးလ်လိုပဲ မန်ယူအသင်းအတွက်လည်း အုပ်စုကတက်ဖို့ သေရေးရှင်ရေးဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီအခြေအနေ ရောက်ခဲ့တာက မန်ယူအသင်း ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်ဖန်တီးခဲ့တာလို့ပဲ ပြောရမယ်။ ဗလင်စီယာ၊ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ကို အိမ်ကွင်းပွဲ ကစားရပေမယ့် (၁)မှတ်ပဲ ရခဲ့တာက ဆိုးရွားလွန်းတယ်။ ဗလင်စီယာနဲ့ပွဲမှာ တိုက်စစ်က အလွဲလွဲအချော်ချော်နဲ့ ဂိုးမရှိသရေကျ၊ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ဘယ်လိုမှ ယှဉ်မကစားနိုင်ဘဲ ရှုံးခဲ့တာက စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် မန်ယူဟာ အုပ်စုက ထွက်ရဖို့တောင်ရှိနေတယ်။ ဒီနေ့ ကစားမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ပွဲမှာ ရှုံးခဲ့ပြီး ဗလင်စီယာက ယန်းဘွိုင်းစ်ကို အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် မန်ယူ အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး။ နောက်တစ်ပွဲက ဗလင်စီယာနဲ့ အဝေးကွင်းပွဲကစားရဦးမှာဖြစ်လို့ စပိန်မြေမှာ ရုန်းကန်ရလေ့ရှိတဲ့ မန်ယူအတွက် ခက်ခဲဦးမှာပါပဲ။ အုပ်စုကတက်ဖို့ဆိုရင် လာမယ့်(၂)ပွဲမှာ မန်ယူ အနည်းဆုံး (၃)မှတ် ရဖို့လိုပြီး အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲက ယန်းဘွိုင်းစ်ကို အိမ်ကွင်းကစားရမှာဖြစ်လို့ အခက်အခဲ မရှိလောက်ဘူး။
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို လီဗာပူးလ်က (၅)ကြိမ်၊ မန်ယူက (၃)ကြိမ် ရယူခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းမှာ အောင်မြင်မှု အများဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ဒီနှစ်သင်း အခုလိုအခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာက စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ ဒီနှစ်သင်းအပြင် စပါးအသင်းကလည်း အခြေအနေ သိပ်မကောင်းလို့ အင်္ဂလန်ကလပ်တွေ အုပ်စုအဆင့်ကပဲ စောစောစီးစီး နှုတ်ဆက်ရမလား၊ ဘယ်အသင်း ကျော်ဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ . . .
ခနျြပီယံလိဂျမှာ နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ ရုနျးကနျရတော့မယျ့ လီဗာပူးလျနဲ့ မနျယူ
ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျမှာ အင်ျဂလနျကလပျ (၄)သငျးဖွဈတဲ့ မနျစီးတီး၊ မနျယူ၊ လီဗာပူးလျ၊ စပါးအသငျးတို့ ပါဝငျယှဉျပွိုငျနပွေီး အံ့သွစရာကောငျးတာက (၃)ပှဲကစားပွီးခြိနျအထိ ဘယျအသငျးနောကျတဈဆငျ့ တကျမလဲဆိုတာ အသအေခြာ မပွောနိုငျသေးတာပါ။ ဒီ(၄)သငျးထဲမှာ မနျစီးတီးတဈသငျးလောကျပဲ အုပျစုကို ဦးဆောငျနပွေီး နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ (၆၀)ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ရှိနပေမေယျ့ စပါး၊ မနျယူ၊ လီဗာပူးလျတို့ကတော့ (၅၀-၅၀)အနအေထားဖွဈနတေယျ။ ပိုဆိုးတာက အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကရဲ့ အောငျမွငျမှု အမြားဆုံး အသငျး(၂)သငျးဖွဈတဲ့ လီဗာပူးလျ၊ မနျယူတို့အတှကျ လကျကနျြပှဲတှမှော လုံးဝအမှား မခံတော့တာပါ။
ထူးခွားတာက ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရှုံးပှဲလုံးဝမရှိဘဲ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျး ခနျြပီယံလိဂျမှာ ရုနျးကနျနရေတာပါပဲ။ မနကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ဇီဗကျဒါနဲ့ပှဲမှာ မထငျမှတျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ နောကျတဈဆကျတကျဖို့ သခြောမယျ့ အခှငျ့အရေးကောငျးတဈခုကို လကျလှတျခဲ့ရတယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ဂိုးသှငျးခှငျ့တှေ အကွိမျကွိမျလှဲခြျောခဲ့ပွီး ဇီဗကျဒါအသငျးကတော့ အခှငျ့အရေးတဈကွိမျရရငျ တဈကွိမျအကောငျးဆုံး အသုံးခလြို့လညျး မမြှျောလငျ့တဲ့ ရလဒျထှကျပျေါခဲ့တာပါ။
လကျကနျြပှဲတှမှော PSG နဲ့ အဝေးကှငျး၊ နာပိုလီနဲ့ အိမျကှငျး ပှဲကပျြတှေ ဆကျကစားရမှာဖွဈလို့ ကွိုးကွာနီတို့ရဲ့ အုပျစုက တကျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြက မရမေရာဖွဈလာပါပွီ။ ပိုဆိုးတာက နာပိုလီနဲ့ PSG အသငျးတို့ဟာ လကျကနျြပှဲမှာ ဇီဗကျဒါနဲ့ ကစားရမှာဖွဈပွီး (၃)မှတျ သခြောတဲ့အနအေထားဖွဈနတောကွောငျ့ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ မွှပေူရာကငျးမှောကျပါပဲ။
လီဗာပူးလျလိုပဲ မနျယူအသငျးအတှကျလညျး အုပျစုကတကျဖို့ သရေေးရှငျရေးဖွဈနပေါပွီ။ ဒီအခွအေနေ ရောကျခဲ့တာက မနျယူအသငျး ကိုယျ့ကံကွမ်မာကို ကိုယျဖနျတီးခဲ့တာလို့ပဲ ပွောရမယျ။ ဗလငျစီယာ၊ ဂြူဗငျတပျဈတို့ကို အိမျကှငျးပှဲ ကစားရပမေယျ့ (၁)မှတျပဲ ရခဲ့တာက ဆိုးရှားလှနျးတယျ။ ဗလငျစီယာနဲ့ပှဲမှာ တိုကျစဈက အလှဲလှဲအခြျောခြျောနဲ့ ဂိုးမရှိသရကြေ၊ ဂြူဗငျတပျဈကို ဘယျလိုမှ ယှဉျမကစားနိုငျဘဲ ရှုံးခဲ့တာက စိတျပကျြစရာပါပဲ။ အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ မနျယူဟာ အုပျစုက ထှကျရဖို့တောငျရှိနတေယျ။ ဒီနေ့ ကစားမယျ့ ဂြူဗငျတပျဈနဲ့ပှဲမှာ ရှုံးခဲ့ပွီး ဗလငျစီယာက ယနျးဘှိုငျးဈကို အနိုငျရမယျဆိုရငျ မနျယူ အခွအေနမေကောငျးတော့ဘူး။ နောကျတဈပှဲက ဗလငျစီယာနဲ့ အဝေးကှငျးပှဲကစားရဦးမှာဖွဈလို့ စပိနျမွမှော ရုနျးကနျရလရှေိ့တဲ့ မနျယူအတှကျ ခကျခဲဦးမှာပါပဲ။ အုပျစုကတကျဖို့ဆိုရငျ လာမယျ့(၂)ပှဲမှာ မနျယူ အနညျးဆုံး (၃)မှတျ ရဖို့လိုပွီး အုပျစုနောကျဆုံးပှဲက ယနျးဘှိုငျးဈကို အိမျကှငျးကစားရမှာဖွဈလို့ အခကျအခဲ မရှိလောကျဘူး။
ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို လီဗာပူးလျက (၅)ကွိမျ၊ မနျယူက (၃)ကွိမျ ရယူခဲ့ပွီး အင်ျဂလနျဘောလုံးသမိုငျးမှာ အောငျမွငျမှု အမြားဆုံးအဖွဈ သတျမှတျခံထားရတဲ့ ဒီနှဈသငျး အခုလိုအခွအေနတှေနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတာက စိတျပကျြစရာပါပဲ။ ဒီနှဈသငျးအပွငျ စပါးအသငျးကလညျး အခွအေနေ သိပျမကောငျးလို့ အင်ျဂလနျကလပျတှေ အုပျစုအဆငျ့ကပဲ စောစောစီးစီး နှုတျဆကျရမလား၊ ဘယျအသငျး ကြျောဖွတျနိုငျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျပါ . . .